फार्ममा काम गर्ने छ जना मध्ये ५ जनाकाे हत्या भएपछि आयो यस्तो खुलाशा! – PathivaraOnline
Home > अपराध > फार्ममा काम गर्ने छ जना मध्ये ५ जनाकाे हत्या भएपछि आयो यस्तो खुलाशा!
admin June 9, 2020 अपराध 0
रुपन्देही, जेठ २७ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा-१० कान्छीबजार मैनहवामा सोमबार राती पाँच जनाको सामूहिक ह’त्या भएको छ । रुपन्देहीको कान्छी बजारमा ५ जनाको ह’त्या भएको छ । केहि समय अगाडि जाजरकाेटमा भएकाे नरसंहार बिर्सन नपाउँदै फेरि रूपन्देहीमा भएकाे यो घटनाले सबैमा त्रास फैलिएकाे छ ।
कुखुरा फार्ममा काम गर्ने ५ जनाको ह’त्या भएको र उक्त फर्ममा काम गर्ने अर्काे एक जना अज्ञात रहेको प्रहरीले बताएको छ । फरार रहेको सुर्खेतका झपेन्द्र सिंजालीको बारेमा प्रहरीले खोजि गरिरहेको छ । मृ’त्यु हुनेहरुमा एक जना महिला र चार जना पुरुष छन् ।
छिमेकिका अनुसार, उक्त फार्ममा एक महिलासहित ६ जना रहेको र एक जना बाहेक सबैको ह’त्या भएको छ। बे’होस् अवस्थामा रहेको एक जना अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
स्मरण रहाेस, मृ’तक र ह त्या गर्ने दुवै स्थानीय गाईभैंसी फार्ममा काम गर्ने मजदुर रहेको स्थानीय घनश्याम चौधरीले बताए । मृ त्यु हुनेहरुमा एक जना महिला र चार जना पुरुष छन् ।
‘फेमिली’ र ‘मेरा २ महान चेम्वर्स’ लेखेर पारस शाहले शेयर गरे हिमानी सहित छोरीहरू नाचेको भाईरल भिडियो, हेर्नुस्